TORITENY Alahady 07 Aogositra 2016 | FJKM Amboniloha
TORITENY Alahady 07 Aogositra 2016
« MIARA-MIASA AMIN’NY FINOANA NY MINO »
I Tantara 29, 1-9 / Marka 2, 1-12 / Asan’ny apostoly 11, 19-26
Ny bokin’ny I Tantara 29 dia milaza fa faniriana lalina tao am-pon’i Davida ny hahavita ny Tempoly samirery, nefa dia nolazain’i Jehovah taminy fa ny zanany no hanao izany. Tsy nampiraviravy tanana azy anefa izany fa tena nanao izay faraheriny izy hahavita tsara ny Tempoly.
Tena resy lahatry ny fitiavan’Andriamanitra azy Davida ka niasa tokoa tamin’ny fanampiana ny fanorenana ny Tempoly. Nanome lesona tsara ho an’ny mino izy teto satria raha nahita izany ny fihetsiny izany ny Fiangonana (Zanak’Israely) dia samy nanolotra an-kitsipo ny talenta nananany. « Miara miasa hampandroso ny fanjakan’Andriamanitra »
Lesona : ny fitiavako an’Andriamanitra
Raha hanao ny asan’Andriamanitra aho , dia manery ahy voalohany indrindra ny fitiavako an’Andriamanitra satria Izy no efa tia ahy taloha. Mikarakara ahy Andriamanitra ary mbola nomeny ahy Jesoa Kristy hisolo heloka ahy.
Aza andrasana ny hafa ny fanatanterahana ny fikasana tsara ao anatinao cf and 2
Lalim-paka ny finoan’ny fianakavian’ilay marary ; fa Jesoa Kristy ihany no vaha olana ho azy ireo. Ka na inona na inona sakana tsy nahafahany nihaona tamin’i Jesoa dia nitady ny hevitra rehetra izy ireo ka vitany hatramin’ny nampidina ny marary avy eny ambony tafo.
Hita taratra eto ny firaisam-pon’ny mpitondra marary sy ny fiombonan’aina tao anatin’izy ireo, tanjona dia ny hahazoana fanasitranana hanehoana ny fahalebeazan’Andriamanitra.
Lesona : ny firaisam-po no ho entina manatanteraka ny asan’Andriamanitra
Aoka ho amin’ny firaisam-po no ho entina manatanteraka ny asan’Andriamanitra. Apetraka tsara ny tanjona iombonana mba hampihasinkasina ny voninahitr’Andriamanitra .
Asan’ny apostoly 11 : 19 – 26
Maty voatora-bato Stefana satria nampibebaka olona, ary Saoly koa dia nakasitraka izany famonoana izany tamin’ny fotoan’andro. Nitohy hatrany anefa ny fitoriana ny Filazantsara, ary nahavariana aza fa Saoly sy Barnabasy dia nanjary mpiara-miasa raha tokony ho mpifahavalo.
Lesona : Poteho ny efitra mampisaraka
Poteho ny efitra mampisaraka mba hampahomby ny fitorina ny filazantsara sao manjary henatra ho an’ny anarana maha Kristiana cf and 25 .
ANDRIANARISOA Hajaniaina Céléstin, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 10 août 2016